Bolivia: Fitorian-teny Fanelezana ny Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2018 13:00 GMT
Dikantenin'ny lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny teny Espaniola tao amin'ny Blogs de Bolivia ity.
Noho ny fahombiazan'ilay Andiany Faharoa Fihaonan'ny Blaogera sy ireo Mpampiasa Mundo al Reves natao tamin'ny Asabotsy 8 Jolay lasa teo tany Santa Cruz izay nandraisan'ny olona 26 anjara (indrindra blaogera sy mpamaky blaogy), nanomboka hetsikana blaogera mitondra ny lohateny hoe ”Adalanà Blaogy” ilay vondrona mavitrika, izay toy izao ny antsipirihany, araka ny tenin'ny iray tamin'ireo mpandray anjara fototra tamin'ilay hetsika, i Sebastian Molina :
Inona no atao amin'izany?? Fanadalàna ny olona akaiky anao amin'ilay hoe: inona no atao hoe blaogy, inona ny foto-kevitra amin'izany, inona ny tontolon'ny blaogy, ary indrindra, mba handresena lahatra ny rehetra izay heverina fa mety hahavita mamorona iray sy hanavao izany. Ary avy eo, hifandimbidimby hamerina izany indray ireo resy lahatra, amin'ny endrika onja mipariaka be.
Fampielezankevitra ”ifampizaràna” izany, izay hifantoka amin'ny tsirairay amin'ireo blaogy izay maniry ny handray anjara, hirotsaka ary ho arahan'ny mundoalreves.com. Fa tsy maintsy mamerina izahay, samy handray anjara isika amin'izay tsapantsika fa fanapariahana ny blaogy sy ny zavatra mety ho azon'izy ireny entina, miainga avy amin'ny blaogintsika manokana sy ireo toerana fivezivezena izay ananantsika rehetra fahafahana miditra.
Hatreto, blaogera maro no nanatevina laharana tamin'ilay fanentanana , ary avy amin'ny tranonkalan-dry zareo, tomponandraikitra amin'ny fampielezana ity hetsika fisantarana izay haminavinantsika ny fahombiazantsika tsara indrindra ity izy ireo.
Blaogy izay efa nirotsaka tao anatin'ilay fanentanana: